ဆူရ်ဘုန်လေယာဉ်ကွင်း တည်ဆောက်မှု ၅၂ ရာခိုင်နှုန်း ပြီးစီးနေပြီး ၂ဝ၂ဝ ပြည့်နှစ်တွင် လေယာဉ်မျာ?? - Yangon Media Group
ဆူရ်ဘုန်လေယာဉ်ကွင်း တည်ဆောက်မှု ၅၂ ရာခိုင်နှုန်း ပြီးစီးနေပြီး ၂ဝ၂ဝ ပြည့်နှစ်တွင် လေယာဉ်မျာ??
ဖလမ်း၊ မတ် ၁ဝ
ချင်းပြည်နယ်တွင် ပထမဆုံးတည်ဆောက်သည့် လေယာဉ်ကွင်းဖြစ်သော ချင်းပြည်နယ်၊ ဖလမ်းမြို့နယ် ဆူရ်ဘုန်လေယာဉ်ကွင်းမှာ မတ်လဆန်းတွင် ၅၂ ရာခိုင်နှုန်း ပြီးစီးနေပြီဖြစ်သည့်အတွက် ၂ဝ၂ဝပြည့်နှစ်တွင် လေယာဉ်များ စတင်ဆင်းသက် အသုံးပြုနိုင်တော့ မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ”၂ဝ၂၁-၂ဝ၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ် တွင်အပြီးတည်ဆောက်ဖို့ဖြစ်သော်လည်းနိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့ နိုင်ငံ တော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့က ၂ဝ၂ဝ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် အပြီးတည် ဆောက်ဖို့ ညွှန်ကြားထားတဲ့အတွက် အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ချင်းပြည်နယ်လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးရွှေထီးအို ကပြောကြားသည်။
ဆူရ်ဘုန်လေယာဉ်ကွင်းကို ၂ဝ၁၆- ၂ဝ၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ပေ ၆ဝဝဝ တွင် စတင်တည်ဆောက် ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ လေယာဉ်ပြေးလမ်း အလျားမှာ ပေ ၁၆ဝဝဝ နှင့် အကျယ်မှာ ပေ ၁ဝဝ ရှိသည်။ ”ဖလမ်းဆူရ်ဘုန် လေယာဉ် ကွင်းတည်ဆောက်ရေးမှာ လက်ရှိ မြေထိန်းနံရံ တည်ဆောက်မှုတွေကတော့ အပြီးသတ်ပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဖက်မြေထိန်းနံရံကို လက်ရှိ ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ လေယာဉ်ကွင်းတစ်ခုလုံးရဲ့ ၅၂ ရာ ခိုင်နှုန်းပြီးနေပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ၂ဝ၂ဝ ပြည့်နှစ်ထဲမှာ လေယာဉ် စတင်ဆင်းသက်နိုင်မှာဖြစ်ပါ တယ်”ဟု လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြား ရေးမှူး ဦးကျော်စိုးက မတ် ၉ ရက်တွင် ပြောကြားသည်။
ဖလမ်းဆူရ်ဘုန် လေယာဉ် ကွင်း၏ လေယာဉ်ပြေးလမ်းအမျိုးအစားမှာ Flexible Pavement အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး၊ပြေးလမ်း အရှိန်သတ်အစွန်း Over run မှာ အလျားပေ ၂ဝဝ၊ အကျယ်ပေ ၁ဝဝ နှင့် လေယာဉ်ရပ်နားရာ အလျားပေ ၂၅ဝ အကျယ်ပေ၂၅ဝ ပြေးလမ်းခံနိုင်အားပေါင် ၅ဝဝဝဝ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အင်းတော်ကြီး ဘုရားပွဲတွင် အရက်၊ ဘီယာ၊ မူးယစ်ဆေးနှင့် လောင်းကစားပြုလုပ် ရောင်းချပါက အရေးယူ?
ဗိုလ်တထောင် စေတီတော်ကြီး အတွင်းအပြင်နှင့် တန်ဆောင်းများကို ပြန်လည် မွမ်းမံသွားမည်
တက္ကသိုလ်များရှိ ဘာသာရပ် ဌာနများတွင် စီမံခန့်ခွဲရေး အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းသွားရမည်၊ ပါမောက္ခနှစ